Xiaomi Mi 9: Nkọwapụta, ọnụahịa na ntinye akwụkwọ gọọmentị | Gam akporosis
Xiaomi Mi 9 bụ ọkwa ugbu a: akara ngosi ọhụụ ọhụrụ ahụ
Mgbe izu nke imerime izu gasị, na Xiaomi Mi 9 ka egosiputara eze. A gosipụtara ọhụụ ọhụrụ dị elu nke akara ngosi China na ihe omume na mba ya. Tupu nkwupụta mba ụwa ya ga-eme na Sọnde a na MWC 2019. Izu ole na ole gara aga a ngosi na China na February 20, ihe mechara mee. Ya mere, anyị maara ihe niile gbasara njedebe a.
Kedu ihe anyị ga-atụ anya na Xiaomi Mi 9 a? Ekele maka izu nke izu ndị a anyị nwere ọtụtụ nkọwa gbasara ekwentị a. Site na igwefoto ya nke atọ, ka a akara mkpisiaka ihe mmetụta wuru na ihuenyo na ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ. N'ikpeazụ, njedebe dị elu nke akara ika China bụ ọkwa gọọmentị.
Ihe nlereanya a nke ika ndị China bụ nke elu ugwu. Ihe ịrịba ama ọhụrụ nke ika ahụ nwere ike ịmepụta ụdị ndị na-adọrọ mmasị na oke njedebe a. N'ihi ya, ọ ga-abụ ezigbo ama ama. Na China ọ dịlarị, nwere nnukwu nchekwa nke dị ugbu a.
1 Nkọwa Xiaomi Mi 9
2 Xiaomi Mi 9: Otu njedebe zuru oke
Nkọwa Xiaomi Mi 9
Akụkụ nke nkọwa nke Xiaomi Mi 9 a na-ehi ụra izu ndị a. Ọ bụ ezie na ha mechara nwee ike ikwenye. Ya mere, anyị amatalarị ihe ị ga-atụ anya na njedebe a nke akara ngosi China. Ogo na nnukwu arụmọrụ site n'aka gị. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Nka na ụzụ nkọwa Xiaomi Mi 9
Nlereanya Anyị bụ 9
Usoro njikwa Achịkọ 9 10 na MIUI XNUMX
Ihuenyo 6.39-anụ ọhịa Super AMOLED na mkpebi x 1080 2280 na mkpebi 19: 9
Igwefoto na-aga n'ihu 48 + 16 + 12 MP nwere oghere f / 1.8 na f / 1.2 PDAF na LED Flash
Njikọ Bluetooth 5.0 GPS USB-C WiFi 802.11 ac 4G / LTE Dual SIM USB-C
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka ihe mmetụta wuru na ihuenyo NFC infrared na nnyemaaka button
Batrị 3.300 mAh na ngwa ngwa
Akụkụ X x 157.5 74.67 7.61 mm
Ibu ibu 173 grams
Xiaomi Mi 9 a na-abịakwute anyị Samsung panel Super AMOLED. Ya mere, akara ndị China na-agba mbọ ịdị mma, ọ bụ ezie na nke a nwere ike ibuli ọnụahịa nke ngwaọrụ ahụ nke ukwuu. Ọ họrọla nchapụta nke nits 600, na mgbakwunye ịnwe nchedo Corning Gorilla Glass 6 na ngwaọrụ ahụ. Chinesedị ndị China ejirila ihu nke ekwentị mee ọtụtụ ihe, ebe ọ bụ na ihuenyo ya maka 90,7% nke n'ihu a. Ihuenyo ọzọ na ọkwa mara ihe. N'ezie, akụkụ ya belatara nke ukwuu. Akara ahụ na-ekwu na ala ala ejirila 40% belata.
Xiaomi Mi 9: Otu njedebe zuru oke
Dị ka ọ na-aza maka ọnwa, Xiaomi Mi 9 bụ ama mbụ nke ika nwere Snapdragon 855. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya nnukwu ike site na ngwaọrụ n'ihe gbasara arụmọrụ. Ọ na-eme ya yana ụdị RAM abụọ na nchekwa, 6 na 8 GB nke RAM dabere na ụdị ahụ na 128 na 256 GB nke nchekwa. Ọ ga-enye ndị ọrụ ohere ịhọrọ ụdị ha chọrọ.
Ndabere nke ngwaọrụ a bu ihe na - eweputa otutu ihe. N'ihi na ihe nlere a bụ nke mbụ nke ika ahụ ga-eji igwefoto nwere okpukpu atọ bia. Ka ọ were a na-atụ anya nke ukwuu na ya n'echiche a. Anyị na-ezute a Ihe mmetụta 48 MP, 16 MP ọzọ panoramic ọzọ na igwefoto nwere telephoto optics na ihe mmetụta 12 MP nke atọ. N'ihi ya, ọ na-positioned dị ka otu n'ime ndị kasị dị ike smartphones a na ubi na gam akporo.
Ejikọtara ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'ime ihuenyo. Xiaomi ekwuola na emeela ya ọtụtụ ndozi. N'ezie, tupu ngosi ahụ, ika ahụ ekwuputala na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka nke Xiaomi Mi 9 a kachasị ọsọ na ahịa. Ha emezuola nke a site na iburu ebe dị elu karịa na ihuenyo ahụ, nke na-enye ohere ịrụ ọrụ ka mma.
Batrị ekwentị bụ 3.300 mAh, zuru ezu na njikọta na nhazi. Dị ka atụrụ anya, ọ na-abịa na a ngwa ngwa ụgwọ. Tụkwasị na nke a, anyị na-ahụkwa ikuku na-akwụ ụgwọ, maka oge mbụ na ama nke ụdị akara ndị China. N'aka nke ọzọ, Xiaomi Mi 9 abatalarịrị na Android Pie yana MIUI 10 dị ka akwa nhazi.
Emeelarị Xiaomi Mi 9 na China. Yabụ anyị nwere ọnụahịa gọọmentị nke ngwaọrụ a na China. N'ezie na Sọnde ọnụahịa ya na Europe ga-ekpughere na nkwupụta ya na MWC 2019. Mana, na ọnụahịa ndị dị na China anyị nwere ike inweta echiche nke ihe ị ga-atụ anya na ngwaọrụ ahụ.
Versionsdị nsụgharị atọ dị iche iche nke ngwaọrụ ahụ na-echere anyị, ma ọ dịkarịa ala n'ihe banyere China. Ahịa nke ọ bụla n'ime ụdị ndị a dị elu bụ:
Versiondị 6/64 GB dị ọnụ na 2.499 yuan (326 euro ịgbanwe)
8dị 128/2.899 GB ga-efu XNUMX yuan, nke dị ihe dị ka ya 379 euro Na mgbanwe
Xiaomi Mi 9 na 8/256 GB ga-efu 3.499 yuan (ihe dị ka 457 euro Mgbanwe)
Ọ bụ ezie na ihe kachasị dị mma bụ nke ahụ ọnụahịa ngwaọrụ ga-adị elu na igba egbe na Europe. Mana ugbu a anyị amaghị ego ole ha ga-efu karịa ọnụahịa ha na China. Na mgbakwunye, na nkwupụta ya na MWC 2019 anyị ga-ama mgbe a ga-ebupụta ya na Europe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi Mi 9 bụ ọkwa ugbu a: akara ngosi ọhụụ ọhụrụ ahụ
Xiaomi Mi 9 SE: Uzo ohuru ohuru ohuru
Ihe ọchị na-eri ahụ ara na Boost Buddies